Google Webmaster Central Nahazo Fanatsarana Matotra | Martech Zone
Alarobia, Aprily 28, 2010 Alarobia, Novambra 5, 2014 Douglas Karr
Nandritra ny niarahako niasa tamina client androany maraina dia niditra aho Google Webmaster Central hijerena ireo fangatahana fikarohana voalohany izay mitondra fivezivezena. Ny hitako dia iray heck ny fanavaozana mahasoa!
Tsy nanolotra teny fanalahidy, toerana ary tsindry fotsiny ny Google, fa nanavao ny interface ho lasa interface amin'ny fomba Google Analytics. Koa satria miovaova arakaraka ny mombamomba ny fikarohana manokana ny laharana ankehitriny, Google dia manome anao ny isan'ireo toerana nahitanao ny URL, ary koa ny isan'ny fahatsapana sy ny tahan'ny tsindry.
Betsaka ny orinasa tsy miraharaha ny laharam-pikarohany sy ny tahan'ny tsindry Click-through amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana (SERP). Tahaka ny hanatsaranao ny pejinao hampitomboana ny fiovam-po dia tokony hanatsara ihany koa ny lohatenin'ny pejy sy ny famaritana meta anao hampitomboana ny fiovam-po. Raha laharana faha-1 ka hatramin'ny # 3 ianao ary mahazo eo ambanin'ny 10% ny tsindry dia manana asa tokony hatao ianao. Tokony ho 50% no ho miakatra!
Ity interface vaovao ity dia fampisehoana tsara ny data. Raha vantany vao afaka nanadihady ilay pejy niaraka tamin'ny mpanjifako aho androany maraina, dia hitanay ny fotoana tsy ampoizina eo alohanay noho ny fitaterana fifamoivoizana be dia be mankamin'ny tranonkala miaraka amin'ny fanatsarana sy ny laharam-pahamehana.
Aza milamina Analytics hanatsara ny tranokalanao ho an'ny fiovam-po - avereno miverina izy io ary alao antoka fa mampiasa milina fikarohana voalohany ianao. Ny antsipiriany ihany no manome anao antsipiriany ho an'ireo mpitsidika izay ni-click-through… fa tsy ireo tavela!
Tags: fakan-tsary +hashtagtahan'ny add-to-cart amin'ny findaympitorytsotraSliderStream
Voapaika ve ny WordPress? Dingana folo hanamboarana ny bilaoginao
Apr 28, 2010 amin'ny 9: 01 AM
Yeah. Nahita ny fanovana tato ho ato aho. Faly be aho. Avy eo nojereko bebe kokoa. INDRINDRA aho raha hanao zavatra vitsivitsy miaraka amin'ny angona toy ny milaza amiko hoe avy aiza ny fampiharana Google niavian'ny laharana.
Raha tsy mitana ny laharana faha-1 ho an'ny teny hoe "zombies", "Hookah Lounge", "Wrigley Field," ary "Karen Gillan" ny tranokalako.
Nanoratra ity lahatsoratra ity tao amin'ny SEOBoy aho raha te hijery (tsia, tsy tetika mora vidy io hahazoana fivezivezena. Vitao ny famakiana ilay bilaogy Tech Tech tsy mampino talohan'ny nieritreretanao ny hanindry azy. 🙂 http://bit.ly/de6Ot9).
Mila midina any Indy aho ary hahita anao.